နေခြည်သွေးသစ်: မင်္ဂလာရောင်ခြည်-ဗုဒ္ဓ၀င်ရုပ်စုံ [အခန်းစဉ် ၁၊ ၂] ပြုစုသူ- မင်းယုဝေ။ သရုပ်ဖော်-ပန်းချီဦးစိန်
"....တို့ ကိုးကွယ်နေတဲ့ သာသနာမှာ ဘယ်လို သံဃာကြီးတွေရှိတယ်၊ တို့ သိမီတာရော၊ မသိမီလိုက်တာတွေရော ဘယ်လိုပါကလားဆိုပြီး သာသနာကို ကြည်ညို မြတ်နိုး လေးစားစိတ် တိုးပွါးပါစေ ဆိုတဲ့ စေတနာနဲ့ စုစည်း တင်ပြတာ ဖြစ်ပါတယ်..." လူထုဒေါ်အမာ
လူငယ်သင် ချမ်းမြေ့ အခြေပျိုး ဗုဒ္ဓဘာသာ
ဓမ္မဒေသနာ ပြန့်ပွါးရေးအဖွဲ့ငယ်၊ ချမ်းမြေ့ရိပ်သာ ဝေယျာဝစ္စ အဖွဲ့။
Life of Buddha and His Teaching
By Min Yu Wai
ပိဋိကမှ ရရှိသည့် အသိဥာဏ်ထက် ပိုမိုလွန်ကဲ၍ ဗုဒ္ဓ၏ အလိုအနီးသို့ ဆောင်ကျဉ်း သွားနိုင်သည့် အသိဥာဏ် ဟူ၍လည်း မရှိပေ။
"...... လူ့ယဉ်ကျေးမှုဟာ လူ့အကျိုးစီးပွါးအတွက် လူ့အဆောက်အအုံမှာ သစ်ပင်ကြီးများလို တနေ့တခြား ကြီးထွားလာစေရပါတယ်။ ဆုတ်ယုတ်တယ်၊ ပျက်စီးတယ်ဆိုတာဟာ ကောင်းတဲ့လက္ခဏာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကြီးမားတဲ့ အန္တရာယ်ပါ။
ခုခေတ် ငယ်ရွယ်သူတွေ ဒါကို ကြပ်ကြပ်စဉ်းစားကြပါ......"
မင်္ဂလာရောင်ခြည်-ဗုဒ္ဓ၀င်ရုပ်စုံ [အခန်းစဉ် ၁၊ ၂] ပြုစုသူ- မင်းယုဝေ။ သရုပ်ဖော်-ပန်းချီဦးစိန်
၁။ ခမည်းတော်နှင့် မယ်တော်
လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၂၅၀၀-ကျော်က ကပိလ၀တ်ပြည်တွင် သာကီဝင်မင်းမျိုး သုဒ္ဓေါဒနဘုရင် မင်းပြုသည်။ သူသည် ဂေါတမအနွယ်ဖြစ်၍ 'သုဒ္ဓေါဒနဂေါတမ' ဟူ၍လည်း အမည်ရသည်။
ထိုမင်းတွင် မိဖုရားနှစ်ပါးရှိသည်။ မိဖုရားခေါင်ကြီးမှာ မာယာဒေ၀ီ ဖြစ်သည်။ မြောက်နန်းမိဖုရားကား ဂေါတမီဖြစ်သည်။ သူတို့သည် ညီအစ်မအရင်း တော်စပ်ကြသည်။
တညသ၌ မာယာဒေ၀ီမိဖုရားကြီးသည် အိပ်ပျော်နေစဉ် ထူးဆန်းသော အိပ်မက်ကို မြင်မက်သည်။ နတ်မင်းကြီးလေးပါးက သူ့ကို သလွန်နှင့်တကွ ဟိမ၀န္တာသို့ ယူဆောင်သွား ကြသည်။ ထို့နောက် နတ်သမီးလေးပါးက နတ်ရေကန်တွင် ရေချိုးပေးသည်။ ပြီးလျှင် ငွေတောင်အတွင်းရှိ ရွှေပြသာဒ်၌ သိပ်ထားသည်။ ထိုစဉ် ဆင်ဖြူတော်ကြီး တစီးပေါ်လာပြီးလျှင် သူ့ဝမ်းထဲသို့ ၀င်လာသည်ဟု မြင်မက်သည်။
ထိုအချိန်မှာပင် မာယာဒေ၀ီ၏ ၀မ်း၌ ဗုဒ္ဓဘုရားလောင်းကို သန္ဓေ တည်လေသည်။
1. Buddha's father and mother.
Over two thousand five hundred years ago, there reigned in Kapilavatthuaking named Suddhodana. He was of the Gotama clan and so was also named as Suddhodana Gotama.
He had two queens who were sisters; the elder and chief queen was called Mayadevi, and the younger and lesser (second) queen was Gotami.
One night Queen Mayadevi dreamt an extraordinary dream thus "four celestial beings (gods) carried her, along with the royal couch to Himavanta (Himalayas mt.); there four fairies after letting her bathe in the celestial lake, let her sleep in the golden building situated in the silver mountains. While she was thus sleeping,awhite elephant appeared and entered her womb."
At that moment, the Bodhisat* (Buddha-to-be) took conception in Queen Mayadevi's womb.
* Bodhisat= Bodhisatta
သန္ဓေ ၁၀ လ စေ့သော် မာယာဒေ၀ီသည် ခမည်းတော် မယ်တော်တို့ရှိရာ ဒေ၀ဒဟပြည်သို့ သွားလိုသဖြင့် မင်းကြီးထံ ခွင့်ပန်သည်။ မင်းကြီးကလည်း ကြည်သာစွာ ခွင့်ပေးသည်။
တနံနက်တွင် မာယာဒေ၀ီမိဖုရားကြီးသည် ရွှေထမ်းစင်ကို စီးလျက် အခြွေအရံများ ခြံရံကာ ဒေ၀ဒဟပြည်သို့ ထွက်လာခဲ့သည်။
လမ်းခရီးအကြားရှိ လုမ္ဗိနီဥယျာဉ်သို့ ရောက်သောအခါ ပင်လုံးကျွတ်ပွင့်နေသော အင်ကြင်းပင်ကို မြင်သည်။ ၀င်ရောက်ခူးဆွတ်လိုသောကြောင့် အခြွေအရံတို့အား "ခေတ္တရပ်နားကြပါ" ဟူ၍ ဆိုလေသည်။
မာယာဒေ၀ီသည် ရွှေထမ်းစင်မှ ဆင်းသက်၍ အင်ကြင်းခက်ကို ဆွဲကိုင်စဉ် ဘုရားလောင်းကို ဖွားမြင်သည်။ ထိုအချိန်ကား မဟာသက္ကရာဇ် ၆၈ ခု (ဘီ-စီ ၆၂၃) ကဆုန်လပြည့်၊ သောကြာနေ့။
ဘုရားလောင်းသည် ဖွားလျှင်ဖွားချင်းပင် မတ်တတ်ရပ်သည်။ ထို့နောက် ခုနှစ်ဖ၀ါး လှမ်းသွားပြီးလျှင် ကြုံးဝါးသည်။
"ငါသည် တလောကလုံးထက် မြတ်၏။"
ဘုရားလောင်းဖွားမြင်သော အချိန်မှာပင် ယသော်ဓရာမင်းသမီး၊ ညီတော် အာနန္ဒာ၊ ကာဠုဒါယီအမတ်လောင်း၊ ဆန္ဒအမတ်လောင်းတို့ကိုလည်း အသီးသီး ဖွားမြင်သည်။ ကဏ္ဍကမြင်းကိုလည်း မွေးသည်။ ရွှေအိုးကြီး လေးလုံးလည်း ပေါ်သည်။ ဗောဓိပင်လည်း ပေါက်သည်။ ယင်းတို့သည် ဘုရားလောင်း၏ ဖွားဖက်တော် ခုနှစ်ဦး ဖြစ်သည်။
When the pregnancy was ten months old, Queen Mayadevi wanted to visit her parents and so asked permission from King Suddhodana to let her go to her parents' country (city) Devadaha. The King willingly gave his permission.
One morning Queen Mayadevi surrounded by attendants, departed towards Devadaha onagolden litter (palanquin).
On the way, they came upon Lumbini garden where she perceivedasal tree (shorea robusta) in full bloom. Wishing to enter the garden for plucking the flowers, the Queen told her attendants to stop forawhile.
Queen Mayadevi stepped down from the golden litter and as she pulled the sal branch (she) gave birth to the Bodhisat. That day was Friday, the full moon day of the month Kason, second month of the great era (Myanmar era) 68 (B.C. 623)
As soon as he was born, Bodhisat stood up and advancing seven steps proclaimed aloud thus- "I am the most exalted in the whole world."
At the same moment as the Bodhisat was born, Princess Yasodhara, Buddha's younger brother Ananda, would be Kaludayi-, would be Chanda were also born. Simultaneously Kandaka horse was also born; four great gold pots rose up (out of the ground). Bodhi tree also grew up. These were the seven who were born at the same moment as the Bodhisat.
Posted by နေခြည်သွေးသစ် at 7:36 AM
when i was5year old, i knew how to read very well by my parents'kindness.This is the very first book they gave us(me & my elder bro)to read by heart.Then, after all the chapters were done, parpar asked me to re-tell, now i m nearly 30,away from my parents but i never forgot those times together with them.
August 14, 2010 at 9:10 PM